Tolotr’asa / fiofanana
tany meva dia:
Ny Tany Meva dia fikambanana mitady famatsiam-bola maharitra ho an’ny tetikasa miompana amin’ny tontolo iainana, iandraiketan’ny fikambanana eo an-toerana sy vondron’olona.
Arak’izany, ny fikambanana dia miantsoroka andraikitra roa lehibe: famoronana loharanom-bola sy famatsiam-bola tetikasa.
Ny famatsiam-bolany dia miompana amin’ny fanatsarana ny tontolo iainana sy ny fari-piainan’ny vondron’olona eo an-toerana.
Ny Tany Meva dia fikambanana malaza amin’ny famatsiam-bola sy fanomezan-danja ny fampandrosoana maharitra.
Manetsika sy manome ny famatsiam-bola ho amin’ny fampandrosoana ara-toekarena, ara-tsosialy ary ny tontolo iainana eny amin’ny vondrom-piarahamonina, mba hanatanterahana ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary.
Fangaraharana sy tamberin'andraikitra
Satria tsy maintsy manao tatitra amin’ny mpiara-miombon’antoka aminy rehetra ny Tany Meva, amin’ny maha-rafitra ilain’ny daholobe azy, tsy maintsy mazava tsara izy amin’ny fanatontosana ny antompisiany, ary tsy maintsy manao tatitra ny asa ataony, ka manome vahana ny fahazoan’ny daholobe ny vaovao momba ny dingana arahina amin’ny famatsiam-bola sy ny fampiasana ny vola tantanana.
Amin’ny alalan’ny fisian’ny tarika mandray andraikitra, marisika ary manokan-tena amin’ny fanatontosana mahomby ny antompisiany, ny Tany Meva dia mampanantena ny hiantoka ny kalitaon’ny asany, hanatsara hatrany ny fomba fiasany ary hanatontosa vokatra azo tsapain-tanana.
Fahamarinana ary ny fiantohana ny rariny sy hitsiny
Ny Tany Meva dia manome lanja ny fitantanana mahomby ao amin’ny fomba fitantanany sy ny asa famatsiam-bolany, amin’ny alalan’ny tsy fiangarana, tsy fitanilana ary fahamarinana avo lenta. Ankoatr’izay, ny fikambanana dia manome lanja ny miralenta, na eo anivon’ny mpiasa izany na eo amin’ny lafin’ny fanomezana famatsiam-bola.
Ny Tany Meva dia mandray ny fanapahan-keviny malalaka ary tsy misy idiran’ny firehana politika, ara-pivavahana, ara-poko na ivelan’ny fahefana hafa.
Fifanajana, fifampiresahana ary fihainoana
Ny Fikambanana Tany Meva dia manome vahana ny fifanakalozana, ny fanomezana lanja ny tsirairay ary fijerena manokana ny hafa, ny fiaraha-miasa, ny fizarana traikefa, ny fisokafan’ny saina ao anatin’ny tontolon’asa mirindra sy feno fifanajana
(261) 20 22 403 99
fandraisana mpiasa vaovao amin'izao fotoana izao